I-Cloudimage.io: Izithombe ezifakwe kunqolobane, ezisikiwe, ezinikwe usayizi, noma ezinamanzi njengesevisi | Martech Zone
I-Cloudimage.io: Izithombe ezifakwe kunqolobane, ezisikiwe, ezinikwe usayizi, noma ezinamanzi njengesevisi
NgoMsombuluko, Januwari 8, 2018 Douglas Karr
Muva nje, bengisebenza kancane kule ndawo ukuthola ijubane. Ngisuse ithani lezingxenye ezihambayo ukwenza lula ukuthi kwenziwa kanjani imali futhi lihlanganiswe, kepha ijubane lesiza lisahamba kancane. Nginesiqiniseko sokuthi kunomthelela ekufundeni kwami ​​naku- my ukusesha okuphilayo finyelela. Ngemuva kokucela usizo lomngane wami, u-Adam Small, osebenza njengombani ngokushesha ipulatifomu yokumaketha ingcebo, into yokuqala ayikhombisile ukuthi nginezithombe ezinkulu kakhulu ezilayishwayo kubha yami eseceleni ye-podcast.
Lokhu bekuphazamisa ngoba izithombe zivela kusayithi lomuntu wesithathu engingalawuleki kangako. Ngokufanelekile, bengizothanda ukuthi nginqume futhi ngazigcina endaweni yangakini, kepha-ke bekuzodingeka ukuthi ngibhale ukuhlanganiswa okuyinkimbinkimbi. Ukungasho lokho, ngisho nokuhlanganiswa okuqinile, isikhathi esizothatha ukulanda nokukhulisa izithombe sizoba sibi. Ngakho-ke, ngemuva kokwenza usesho oluku-inthanethi, ngithole insiza ephelele - Kunen.io
Kumthwalo wokuqala wesithombe, i-Cloudimage ilanda isithombe sakho soqobo ngebhakede lakho le-server / S3, futhi basilondoloze kwingqalasizinda yabo enika amandla.
ICloudimage.io ingakwazi ukukhulisa usayizi, isitshalo, ifreyimu, i-watermark, futhi icindezele isithombe ukusenza siphendule futhi sikongele isikhathi.
Izithombe zakho zilethwa kumakhasimende akho ngejubane lokukhanya ngama-CDN asheshayo, okuholela ekuguqulweni okungcono nasekuthengisweni okuningi.
Ekwenziweni kwami, benginokuphakelwa kwe-podcast lapho bengifuna ukubonisa khona izithombe ze-podcast ngo-100px nje ngo-100px kepha, imvamisa, izithombe zoqobo zazizinkulu (ngobukhulu nefayela). Ngakho-ke - nge-Cloudimage, sikwazi ukufaka nje i-URL Yesithombe ku-Cloudimage API, futhi isithombe senziwe usayizi futhi silondolozwe ngokuphelele.
https://ce8db294c.cloudimg.io/isitshalo /100x100 / x /https://images.fireside.fm/podcasts/images/c/c5d9b182-9c16-43a8-873d-ccc51c40dd8b/episodes/b/b638ca26-7bd9-4f6a-b039-99792720ff4a/cover.jpg
Qaphela i-URL ephelele:
Isizinda sethokheni ku-CloudImage
Yala ukusika isithombe
Ubukhulu busethwe ku-100px ngo-100px
Indlela yami yokuqala yefayela
Ngikwazile futhi ukukhiya ama-URL ami lapho bengingasebenzisa khona i-Cloudimage API ukuze abanye bangayintshontshi. Kungakapheli nemizuzu embalwa, isisombululo besesikulungele, futhi kungakapheli ihora ngase ngisebenzise isisombululo ku-_ yethu Okuphakelayo kwePodcast Iwijethi.
Tags: ibhakedeimngceleeminyanisiweisitshalouhlakaukulondolozwa kwesithombeUkuminyaniswa kwesithombeukunqampula isithombeukushintsha usayizi wesithombeisithombe se-watermarks3Ithokhenii-watermarki-watermarking
Umphathi Wekhasimende we-Outook: Uhlelo Lokusebenza Lokuphatha Mahhala lwe-Office 365 Business Premium